La Mojarra Azul | Ngeentlanzi
Enye ye ezona ntlanzi zintle zamanzi amatsha, esinokuba nayo kwi-aquarium ibizwa ngokuba yi-blue mojarra, ekwabizwa ngokuba yi-mojarra ekhanyayo okanye i-acara azul. Nangona ivela kwimilambo yamazwe afana neTrinidad kunye neTobago kunye neVenezuela, namhlanje sinokuyifumana eColombia, kwindawo yaseCaribbean, eCatatumbo Basin nakwi-Orinoco River Basin.
Igama lezenzululwazi lale ntlanzi ngu IAesquidens Pulcher, kwaye yahlulwe ziintsiba zayo ezintathu, ezibekwe kwilungu lokugqibela nakwinkolelo ye-lobe kwi-arch yokuqala.
Olu hlobo lubonakala ngokuba nomzimba omile okweqanda, unomlomo ojikelezayo. Inemibala eyahlukileyo emzimbeni wayo njenge-olive, enamaqela asibhozo ajikelezayo kwinxalenye yomzimba wayo, kunye nemigca emininzi eluhlaza-eluhlaza kwizidlele zayo. Njengoko kuqhele ukwenzeka kwilizwe lezilwanyana, abesilisa bezi ntlobo banemibala ngakumbi kwaye bakhulu kunababhinqileyo.
Ukuba ucinga ukuba unolu hlobo lweentlanzi kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba wazi ukuba batya ikakhulu izinambuzane kunye nezilwanyana eziphilayo, ke ayicetyiswa into yokuba ubondle ngokutya okomileyo, okanye esikalini esikhethekileyo seentlanzi. Ngendlela efanayo, ukuba uyafuna phakamisa olu hlobo lweentlanzi kwaye ufezekise ukuveliswa kwabo kwakhona, kuya kufuneka wazi ukuba abazivelisi kwiimeko ezixineneyo, ke kuyacetyiswa ukuba ube yindoda enye kuphela nebhinqa elinye.
Gcina ukhumbula ukuba le ntlanzi, nangona iseluxolweni, iyayikhusela indawo yayo, ngakumbi ukuba iyiphumelele neqabane layo. Ke ndicebisa ukuba uzigcine kwi-aquarium eyahlukileyo, enezityalo ezomeleleyo ezaneleyo, amatye kunye neengcambu ukuze zikhule ngokugqibeleleyo nangokufanelekileyo. Khumbula kwakhona ukuba le ntlanzi ivelisa ubuninzi belindle ngoko kuyacetyiswa ukuba uyenze utshintsho oluncinci lwamanzi ngeveki ukuthintela ukugula kunye nosulelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » IBlue Mojarra